Big City Small World (Series2Episode 11 – An embarrassment) - Myanmar Network
Big City Small World (Series2Episode 11 – An embarrassment)
Posted by Forum Moderator2on January 25, 2013 at 16:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Series2Episode 11 – An embarrassment (အတွဲ-၂၊ အခန်း(၁၁)) (အနေခက်အရှက်ကြုံ)
Series2Episode 11 - An embarrassment ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Carlos and Sarah's first date turns out to beadisaster! What exactly has happened?
(ကာလို့(ခ)နဲ့ဆာရာတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဒိတ်လုပ်ခြင်းကတော့ ဆိုးရွားခဲ့တယ်။ ဘာများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်?
Fadi: So, I wonder how Carlos got on with his date.
ကဲ ကာလို့(ခ)သူ့ရဲ့ဒိတ်နဲ့ အခြေအနေဘယ်လိုများရှိမလဲ မသိဘူး
Johnny: His date?
Fadi: Yeah... come on... you remember – he went out with Sarah last night...
အေးလေ လုပ်မနေနဲ့ မင်းမှတ်မိပါတယ်။ ညက သူဆာရာနဲ့ ချိန်းပြီး အပြင်သွားကြတယ်လေ။
Johnny: Oh yeah, sure – they went toanew art gallery, didn’t they?
အာ် ဟုတ်တာပေါ့။ သူတို့ပန်းချီပြခန်း အသစ်ကို သွားကြတာ မဟုတ်လား?
Fadi: Yeah – that’s right... He was really worried about it.
အး ဟုတ်တယ်၊ သူတကယ့်ကို အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပူနေတာ။
Johnny: I’m not surprised. Sarah likes all that strange contemporary art.
ငါကတော့ မအံ့သြပါဘူး။ ဆာရာက အဲဒီလို ထူးဆန်းတဲ့ခေတ်ပေါ်ပန်းချီတွေကို ကြိုက်တယ်လေ။
Fadi: And here he is to tell us all about it!
ဟာဒီမှာ ငါတို့ကို အကြောင်းစုံပြောပြဖို့ သူ ရောက်လာပါပြီ။
Carlos: Hi guys!
Johnny: Hello there! So? How did it go?
ဟေး ….ဟယ်လို ကဲ ဒါဆိုရင် အခြေအနေဘယ်လိုလဲ?
Carlos: How did what go?
Fadi: Come on! Your date with Sarah! How was it?
လုပ်မနေပါနဲ့၊ ဆာရာနဲ့ချိန်းပြီးသွားခဲ့တာလေ။ အဲဒါ အခြေအနေဘယ်လိုလဲ?
Carlos: Oh, er, well..erm...
Johnny: Oh no...
Fadi: Was itadisaster?
Carlos: Oh, no... erm, notadisaster...
ဟင့်အင်း မဟုတ်ပါဘူး၊ အဲ မဆိုးရွားပါဘူး
Johnny: Go on... Give us details.
Carlos: Well, it was at this new art gallery.
အေး အဲဒါကတော့ ဒီပန်းချီပြခန်းအသစ်မှာပေါ့
Carlos: “Black Box” it was called.
နာမည်ကတော့ Black Box တဲ့
Johnny: Hmmm... Sounds more likeanightclub.
Carlos: There were quitealot of people there, and everyone was really fashionable...
အဲဒီမှာ လူတော်တော်များများရှိနေကြတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးကလဲ တကယ့်ကိုခေတ်ဆန်ကြတယ်။
Carlos: Yeah... everyone was wearing black! I felt really scruffy...
ဟုတ်တယ်၊ လူတိုင်းက အနက်ရောင်တွေပဲ ၀တ်ထားကြတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မှ ညစ်တီးညစ်ပတ်မသပ်မရပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
Fadi: Yeah, scruffy – badly dressed.
အး ဟုတ်တယ်၊ မသပ်မရပ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဝတ်စားမထားဘူးပေါ့ကွာ
Johnny: So what was the art like?
ဒါဖြင့်ရင် ပန်းချီကျတော့ရော ဘယ်လိုလဲ?
Carlos: Art? I didn’t think it was art! There were some TVs showing some pictures ofaman walking around an empty room...
ပန်းချီ? ငါကတော့ အဲဒါကို ပန်းချီလို့ မထင်မိဘူး၊ လူတစ်ယောက်အခန်းလွတ်ထဲမှာ လျှောက်သွားနေတဲ့ပုံကို ပြနေတဲ့ T.V တွေလဲရှိတယ်။
Carlos: Then there were some big photographs on the walls...
ပြီးတော့ နံရံတွေပေါ်မှာလည်း ဓာတ်ပုံအကြီးကြီးတချို့ကို ချိတ်ထားတယ်။
Johnny: OK – I like photography.
ကောင်းတာပေါ့… ငါက ဓာတ်ပုံပညာကို စိတ်ဝင်စားတယ်
Carlos: Yeah, me too – but there were all blurred, out of focus – you couldn’t see what they were photographs of! So, I was trying to be interested, you know, to impress Sarah really.
ဟုတ်တယ်၊ ငါရောပဲ ဒါပေမဲ့ အဲဒီပုံတွေအားလုံးက မှုန်ဝါးနေကြတယ်။ ဘာပုံတွေလဲဆိုတာ မမြင်ရဘူး။ အဲဒီတော့ ငါက စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံ ဟန်ဆောင်နေရတယ်။ ဆာရာအထင်ကြီးအောင်ပေါ့လေ။
Fadi: Of course.
Johnny: What was Sarah doing?
Carlos: Well, Sarah was talking to another man, so I went up to them. Sarah introduces me, and then he says ‘What do you think?’ and I said, ‘Well, I think the photographs are all out of focus’.
အင်း - ဆာရာက တခြားလူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတာ။ ငါက သူတို့နှစ်ယောက်နားသွားတော့ ဆာရာက ငါနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ နောက်တော့ အဲဒီလူက ဘာပြောလဲဆိုတော့ ခင်ဗျား ဘယ်လိုသဘောရလ?ဲ” တဲ့ အဲဒီတော့ ငါက ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ “ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဓာတ်ပုံအားလုံးဟာ မှုန်ဝါးဝါးနဲ့”လို့လေ။
Fadi: Fair enough...
Carlos: But then the man, he gets really angry, and walks off!
ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူကလေ တကယ့်ကို စိတ်ဆိုးပြီး လျှောက်ထွက်သွားပါလေရော
Carlos: And Sarah looks really embarrassed.
ပြီးတော့ ဆာရာကလည်း အားနာပြီး အနေခက်သွားပုံရတယ်။
Carlos: It turns out, well, this man, he was the artist.
အပြီးသတ်ကျတော့ ဒီလူက အဲဒီပုံတွေကိုဆွဲတဲ့ ပန်းချီဆရာဖြစ်နေတာကိုး
Fadi/Johnny: Oh no!
Carlos: And they weren’t even photographs... they were paintings, supposed to look like photographs. Sarah explained it all to me, but I didn’t understand anything... I felt so stupid... and Sarah was so embarrassed...
ပြီးတော့ အဲဒါတွေက ဓာတ်ပုံတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဓာတ်ပုံလို့ထင်ရအောင် ဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားချပ်တွေ၊ ဆာရာကတော့ အားလုံး ရှင်းပြပေမဲ့ ငါကတော့ ဘာမျှ နားမလည်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငတုံးငအလို့ ခံစားရပြီး ဆာရာကလည်း အရမ်းအားနာ အနေခက်နေရှာတယ်။
Fadi: Are you going to see her again?
Carlos: Well, I don’t know... I’d like to... I hope so...
အင်း မသိတော့ပါဘူး၊ ချိန်းတော့ချိန်းချင်သား၊ ချိန်းနိုင်ဖို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Johnny: Ask her out again – but this time, take her somewhere you want to go.
သူ့ကို ထပ်ချိန်းလိုက်၊ ဒါပေမဲ့ ဒီတစ်ခါတော့ မင်းသွားချင်တဲ့နေရာကို ခေါ်သွားပေါ့။
Fadi: Good idea.
Johnny: Take her toafootball match – I’ve got tickets for this weekend. You can have them.
ဘောလုံးပွဲကို ခေါ်သွား၊ ဒီစနေ၊ တနင်္ဂနွေအတွက် ငါ့မှာ လက်မှတ်တွေရှိတယ်၊ အဲ့ဒါတွေကို မင်းယူလိုက်။
Carlos: But I don’t like football.
ဒါပေမဲ့ ငါမှ ဘောလုံးပွဲ မကြိုက်တာ
Fadi: Go on! It’sagreat British experience.
သွားပါကွာ၊ ဒါ ဗြိတိသျှအတွေ့အကြံကောင်းပဲ
Johnny: Yeah...Look, I know Sarah – she’ll love it!
ဟုတ်တယ် ဒီမှာကြည့်။ ဆာရာအကြောင်း ငါသိတယ်၊ သူ သဘောကျမျာပါ။
Carlos: Er... Well, OK then. I’ll ask her.
ကာင်းပြီ၊ ဒါဆိုရင်လဲ ငါသူ့ကို မေးကြည့်လိုက်မယ်။
Fadi: Oh no... Look who it is!
အိုး ဒုက္ခပဲ ဒါဘယ်သူလဲဆိုတာ ကြည့်ကြပါဦး
Johnny: Hey Joe! Where’s Olivia?
Bindyu: Joe! He’s so funny... Suchasweet little boy!
ဂျိုး သူကရယ်စရာကောင်းတယ်၊ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်ကလေးပဲ။
Olivia: Joe! Stop that! Sorry everyone.
ဂျိုး အဲဒါ ရပ်လိုက်စမ်း၊ အားလုံးပဲ တောင်းပန်ပါတယ်။
Bindyu: Don’t worry Olivia – I’ll look after him. He’s so much fun!
စိတ်မပူပါနဲ့ အော်လီဗီယာ - သူ့ကို ငါ ထိန်းထားလိုက်မယ်။ သူက ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်
Johnny: Did Harry fix your website?
ဟယ်ရီမင်းရဲ့ ၀က်(ဘ)ဆိုဒ်ကို ပြင်ပေးလား
Olivia: He did.
Harry: Of course I did! I’m an expert!
ဒါပေါ့ ငါပြင်ပေးတာပေါ့၊ ငါက ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ပဲ။
Olivia: Thanks Harry. I owe youacoffee, at least.
ကျးဇူးပဲ ဟယ်ရီ၊ ရှင့်ကို ကျွန်မအနည်းဆုံး ကော်ဖီတစ်ခွက်လောက်တော့ တိုက်သင့်တယ်။
Harry: No problem – I’m just glad you’ve made up with Bindyu.
ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ မင်းနဲ့ ဘင်ဒျူနဲ့ပြန်အဆင်ပြေသွားတာကိုပဲဝမ်းသာလှပါပြီ။
Fadi: Oh yeah? So you’re all friends now?
ဟုတ်တယ်?၊ ဒါဆို အခု မင်းတို့အားလုံး သူငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်?
Harry: Oh yes.
Olivia: She came last night, and looked after my little nephew Joe. They get on together really well!
သူညက အိမ်လာပြီး ကျွန်မရဲ့တူလေးဂျိုးကို ထိန်းပေးတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က တကယ့်ကို အဆင်ပြေကြတယ်။
Johnny: Who’d have thought it?
Olivia: Not me, but there you go.
ကျွန်မကတော့ မထင်မိဘူး၊ ဒါပေမဲ့လည်း အဲဒီမှာ မြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲလေ။
Johnny: Harry – perhaps you and Bindyu should have children!
ဟယ်ရီရေ မင်းနဲ့ ဘင်ဒျူခလေးယူသင့်ပြီထင်တယ်။
Harry: Erm, no, not yet, I don’t think...
ဟာ ဟေ့အေး…. အခုတော့ မဖြစ်သေးဘူးထင်တယ်။
မူရင်းသင်ခန်းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင် နှင့် ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တွင်သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by thant zin tun on January 26, 2013 at 20:24
Permalink Reply by Ratan Biswas on June 20, 2013 at 15:18